Gabadh Soomaali Ah Oo Taariikh Cusub Ka Samaysay Maraykanka | Biyoguurenews.com
Home Wararka Gabadh Soomaali Ah Oo Taariikh Cusub Ka Samaysay Maraykanka
Gabadh Soomaaliyeed oo dhalasho Maraykanka ah haysata ayaa taariikh cusub dhigtay ka dib markii ay noqotay gabadhii u horraysay ee Muslim ah ee ka soo muuqata jariidadda caanka ah ee Sports Illustrated iyadoo xijaaban.
Xaliimo Aadan ayaa ka soo muuqatay qaybta sannad laha ah ee lagu soo bandhigo dharka lagu dabaasho waxayna ka soo muuqatay iyadoo jirkeeda oo dhan uu asturan yahay marka laga reebo inta aan cawrada ahayn ee sida wajiga, gacmaha iyo cagta qaybteeda hoose.
“Gabdhaha da’da yar ee xijaabka xirta waa in ay meel walbe ka helaan gabadh iyaga oo kale oo ay ku daydaan,” ayay tiri Xaliimo oo BBC la hadashay.
Xaliimo Aadan oo ku kortay xero qaxooti oo Kenya ku taalla ayaa u wareegtay Maraykanka iyadoo toddobo jir ah, wax yar ka dibna waxay billawday in ay xirato xijaabka.
“Hadda waxaan aragnaa siyaasiyiin, dumar ganacsada, saxafiyiin telefishinno ka shaqeeya iyo dumar kale oo nolosha guul ka gaadhay iyaga oo xijaaban, taasina waa fariinta aan doonayno in aan dirno” ayay tiri.
“Fal celinta aan helay waa mid cajiib ah ayay tiri, sharaf ayayna ii tahay in jariidadda Sports Illustrated ay qaaddo tallaabo ay ku soo bandhigayso quruxda dumarka xijaaban.”
Sports Illustrated oo boggeeda hore ay ka soo muuqdeen Tyra Banks iyo Beyonce waa jariidad laga leeyahay dalka Maraykanka inta badanna waxaa ku taxan ragga, siyaabo kala duwan ayaana looga falceliyay.
Qof ka mid ah dadkaas ayaa Twitter-ka ku soo qoray “Haddii aad xijaab xiranayso, jirkaagana aad daboolayso ama diintaadu haku farto ama yaysan ku farin ee waxay arrintaasi liddi ku tahay sawirradii quruxda dumarka daaha ka rogayay ee jariidadda looga bartay.
Qof kale ayaa yiri “haddii meesha lagu soo bandhigayo dharka lagu dabaasho oo noocyo kala duwan ah si ay dumarku u gataan way iga dhaadhici lahayd” Balse jariidad rag loogu talagalay marka lagu soo sawiro. Ujeeddadii xijaabka ayayba garab marsan tahay.
Waraysi ay BBC-du ka qaaday 2017 ayay gabadhan dharka xayaysiisa ku sheegtay in xijeebkeedu uu yahay “taaj” waxayna sharaxaad ka bixisay sida qolyaha dharka naqshadeeya ay uga fal celinayaan xaqa ay dumarku u leeyihiin in ay xulasho sameeyaan”.
“Waa arrin layaab noqon karta in aanaan arkin gabadh xijaaban oo dharka xayaysiisa oo caan ah, arrintaasi waa in ay caadi noqotaa, waana in aysan ka duwanaan gabdhaha kale ee dharka xayaysiiya.” Ayay intaas ku sii dartay.
Isla sannadkaas ayay noqotay gabadhii u horraysay ee xijaaban ee dhar xayaysiisa waxayna ka soo muuqatay jariirado ka sooo baxa Maraykanka.
Tifaaftiraha guud ee jariidadda Allure Michelle Lee ayaa BBC U sheegay In jariidaddeedu ay ku faraxsanayd Xaliima iyo in ay ka soo muuqatay bishii Luulyo ee sannadkii 2017kii.
“Maraykanku wuxuu yahay ahaanna doonaa meel la isku milmo. Sawirka quruxda ee Maraykanku hadda wuu noocyo badan yahay, Xaliimo sheekadeeduna waa mid cajiib ah.” Ayay tiri Michelle
Labiskan waxaa markii hore farsamaysay Aheda Zanetti oo ah gabadh Muslim ah oo dalka Australia u dhalatay. Zanetti ayaana sheegtay in ujeeddada ay ka lahayd ay ahayd in dumarka Muslimiintu ay ka qaybqaataan nolosha xeebaha dalka Australia.
“Waxaa rabay in gabdhahaygu ay heleen xorriyad ay waxa ay rabaan ku xulan karaan,” ayay tiri.
Balse dharkan asturan ayaa wali ah mid muran uu ka taagan yahay gaar ahaan Faransiiska oo maamulka magaaliooyin badan ay soo bandhigeen qorsheyaal ay ku mamnuucayaan in xijaab lagu dabaasho, iyaga oo ku dooday in uu ka soo horjeedo mabaa’diidooda.
Zanetti oo ka falcelinaysa tallaabadaas Faransiiska ayaa tiri “maxay rabaan in ay xakameeyaan? Maxayse u ogolaan la’yihiin xaqa in qofku uu nolol caadi ah ku noolaado”.
“Aan u mahadceliya dadka afkaartooda dhiibanaya iyaga oon xaqiiqatan dhagaysanayn waxa ay dumarku doonayaan, taasina waa istikhiyaar”.
Previous articleFaallo, Al-Jazeera: Xilligii ay Soomaaliya gargaarka u diri jirtay Sacuudiga
Next articleDaawo Muuqaal:-Wadanka Djibouti Sidee Ayuu Kacdoon Shacab Uga Dhici Karaa….Dood Gaar Ah.